Nitrux 1.3.9 inouya yakavakirwa paDebian, kugona kusarudza iyo Kernel yekuisa uye nezvimwe | Linux Vakapindwa muropa
Kutanga kwe iyo itsva vhezheni yekuparadzirwa kweLinux "Nitrux 1.3.9" iyo yakavakirwa pahwaro hweDebian package, iyo KDE matekinoroji uye iyo OpenRC boot system uye mune iyi vhezheni vhezheni kune mbiri huru shanduko dzinomira kubva kune dzimwe.
Shanduko yekutanga uye yakakosha pane zvese ndeyekuti mune iyi vhezheni itsva, kugovera kunoita shanduko muhwaro hwesisitimu, kubvira enda kubva kuUbuntu kushandisa Debian sechigadzikoUyezve, imwe shanduko inomira pachena kugona kusarudza iyo Kernel kuiswa.
Kune avo vasingazive kugoverwa, iwe unofanirwa kuziva izvo anovandudza yake NX desktop, inova plugin pane yemushandisi yeKDE Plasma nharaunda. Iyo system kubheja pakushandiswa kweAppImages uye yayo NX Software Center vari kukwidziridzwa kuisa mamwe maapplication.
NX Desktop inopa imwe nzira, kuitiswa kwayo kweiyo systray, iyo yekuzivisa nzvimbo uye dzakasiyana-siyana plasmoid, senge network koneti uye multimedia applet yekutakura vhoriyamu uye multimedia zvemukati yekutamba kutonga. Kubva pamashandisirwo akagadzirwa nechirongwa, chinongedzo chekumisikidza iyo NX Firewall inozivikanwawo, iyo inokutendera iwe kudzora kupinda kune network padanho rezvimwe zvinoshandiswa.
Zvishandiso zvekutanga zvinosanganisira Index file maneja (unogona zvakare kushandisa Dolphin), Kate mameseji edhitaina, Ark kufirita kabhineti, Konsole terminal emulator, Chromium browser, VVave mimhanzi inoridza, VLC mutambi wevideo, suite LibreOffice office otomatiki uye Pix mufananidzo muoni.
1 Nhau huru muNitrux 1.3.9
2 Dhawunorodha vhezheni itsva yeNitrux
Nhau huru muNitrux 1.3.9
Mune iyi vhezheni nyowani kugovera kwakaita shanduko yakakosha, kubvira vakatama kubva kuUbuntu package base (nemamwe mapakeji akatama kubva kuDevuan) uchifarira Debian GNU / Linux. Zvakare, zvekuisa mune iyi nyowani vhezheni Unogona kusarudza pakati pemapakeji neLinux kernels 5.4.108, 5.10.26, 5.11.10, Linux Libre 5.10.26 uye Linux Libre 5.11.10, pamwe nekernel 5.11 ine zvigamba kubva kuLiquorix uye Xanmod mapurojekiti.
Kana ari system zvikamu zvakagadziridzwa, tinogona kuwana izvo zvitsva zve KDE Plasma 5.21.2, KDE Frameworksn 5.79.0 uye KDE Gear (KDE kunyorera) 20.12.3. Yakagadziridzwa kunyorera kusanganisira Kdenlive 20.12.3, LibreOffice 7.1.1, Firefox 87.0.
Kubva pane iyo Yakareruka theme, imwe nyowani yeKStyle yekushandisa dhizaini yakakumbirwa, iyo inotsiva yapfuura Kvantum theme uye inopa dzakasiyana siyana windows shongedzo sarudzo. Nokusingaperi, iwo mabhatani ekudzora hwindo anoenda kukona yepamusoro yekuruboshwe.
Uyewo, akawedzera KIO Fuse plugin, iyo inobvumidza kuwana mafaira kune ekunze mauto kubva kune chero application (SSH, SAMBA / Windows, FTP, TAR / GZip / BZip2, WebDav).
KIO Fuse inoshandisa iyo FUSE mashandiro ekuratidzira ekunze mafaera kune yemuno faira system, iyo inobvumidza kushanda nezvitoro zviri kure kwete chete kubva kuzvirongwa zvinoenderana ne KDE mafomati, asiwo kubva kune zvinoshandiswa zvichibva pane mamwe marongero, semuenzaniso, kubva kuLibreOffice, Firefox uye GTK.
Yakagadziriswazve interface yekutarisa madingindira.
Nyowani KCM module (KConfig module) yakawedzera: online maakaunzi uye software kugadzirisa.
Iyo seti yezvishandiso zvinovakirwa paMaui dhizaini yakagadzirirwa kuvandudza muchinjikwa-chikuva giraidhi manyorerwo akagadziridzwa kuita vhezheni 1.2.1. Nyowani Sherufu uye Clip maapplication akawedzerwa.
Mpv uye qpdfviewer zvabviswa kubva mukuparadzira.
Finalmente kana iwe uchifarira kuziva zvakawanda nezvazvo Nezve kuburitswa kweshanduro iyi nyowani, unogona kutarisa ruzivo mu inotevera chinongedzo.
Dhawunorodha vhezheni itsva yeNitrux
Kana iwe uchida kudhawunirodha iyi vhezheni itsva yekuparadzirwa kweLinux "Nitrux 1.3.9", unofanirwa kuenda ku yepamutemo webhusaiti yeiyo purojekiti uko iwe kwaunogona kuwana iyo yekurodha link yeiyo system mufananidzo uye iyo inogona kunyorwa pane USB nerubatsiro rweEtcher.
Nitrux 1.3.9 inowanikwa kuti ikwanise kurodha pasi kubva chinotevera chinongedzo. Mufananidzo webhutsu i4.6 GB muhukuru. Izvo zviitiko zveprojekti zvinogoverwa pasi pemarezinesi emahara.
Kana iwe uchida kuziva zvakawanda nezve iyo projekiti, unogona kushanyira yayo yepamutemo webhusaiti ku inotevera chinongedzo.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » GNU/Linux » Kugoverwa » Nitrux 1.3.9 inosvika yakavakirwa paDebian, kugona kusarudza iyo Kernel kuisa uye nezvimwe
Parrot 4.11 inotaura zvakanaka kune Python 2 rutsigiro, inosvika neKernel 5.10 uye nezvimwe